China curve conveyor fekitori uye vagadziri | Yuantuo
Curve conveyor inogona kusangana nezvinodiwa zveumwe chete mutsara wekufambisa chinwiwa chinwiwa, kuzadza, kuchenesa uye zvimwe zvigadzirwa, uye zvakare inogona kuita imwechete mutsara kuita mitsara yakawanda uye kufamba zvishoma, kuti ubudise yekuchengetedza simba uye inosangana nezvinodiwa zvekuwandisa kudyiswa sterilizer, bhodhoro rekuchengetedza chikuva uye inotonhorera bhodhoro muchina. Tinogona kugadzira musoro nemuswe wemaketani maviri ekuisa mukati kuti ubatanidze cheni yakasanganiswa, kuitira kuti bhodhoro (rinogona) muviri riri mune rakasimba mamiriro Rinogona kugutsa kumanikidza ...
Curve conveyor inogona kusangana nezvinodiwa zveumwe chete mutsara wekufambisa chinwiwa chinwiwa, kuzadza, kuchenesa uye zvimwe zvigadzirwa, uye zvakare inogona kuita imwechete mutsara kuita mitsara yakawanda uye kufamba zvishoma, kuti ubudise yekuchengetedza simba uye inosangana nezvinodiwa zvekuwandisa kudyiswa sterilizer, bhodhoro rekuchengetedza chikuva uye inotonhorera bhodhoro muchina. Tinogona kugadzira musoro nemuswe wemaketani maviri ekuisa mukati kuti uwirirane neketani yakasanganiswa, kuitira kuti bhodhoro (rinogona) muviri riri muchimiro chine simba Inogona kugutsa kumanikidza uye kusamanikidza kwekufambisa kwehombodo isina chinhu uye bhodhoro rakasimba.
Kunyorera chiyero chebhendi yekutakura: inoshandiswa zvakanyanya kuendesa nekuparadzira chikafu, chikafu chemumagaba, mushonga, chinwiwa, zvizoro uye zvigadzirwa zvekuwachisa, zvigadzirwa zvemapepa, macondiments, dairy nefodya, nezvimwewo, pamwe nepamhepo kuendesa kumashure kurongedza.
Iyo inokodzera kutakura ese marudzi emabhokisi, mabhegi, mapallet, nezvimwe zvinhu zvakawanda, zvinyorwa zvidiki kana zvisirizvo zvinyorwa zvinoda kutakurwa pamapallet kana mabhokisi ekudzoka. Inogona kutakura chidimbu chimwe chezvinhu zvinorema kana kutakura hombe dhizaini mutoro. Zviri nyore kubatanidza uye kusefa iyo mitsetse yedhiramu. Inogona kuumba yakaoma logistics yekufambisa system ine akawanda dhiramu mitsara uye mamwe ma conveyors kana akakosha michina kusangana akasiyana maitiro maitiro. Iyo stacking roller inogona kushandiswa kuona kuisira uye kuendesa zvinhu. Iyo roller track ine zvakwakanakira zveiri yakapusa dhizaini, yakanyanya kuvimbika uye inyore kugadzirisa.
Kuendesa kwakadzikama, izvo zvinhu uye bhandi rekutakura harina hukama hwekufamba, izvo zvinogona kudzivirira kukuvara kune irikupa zvinhu. Ruzha rwakaderera, rwakakodzera nzvimbo yakanyarara yekushanda. Chimiro chiri nyore uye chiri nyore kuchengetedza. Simba rishoma rekushandisa uye rakaderera mutengo. Iyo inokodzera kugadzirwa kwechikafu uye indasitiri yekugadzira, senge mwedzi keke yekugadzira mutsara, package yekugadzira pini yekumhanyisa, yekukurumidza-yakaoma chando yekugadzira tambo, kutakurirwa kwekufambisa chikafu, kuchengetedza chikafu uye kutakurwa kwezvinhu, nezvimwe.
Pashure: Chain inotakura
Zvadaro: Yakakombama bhandi conveyor
Yakakombama bhandi conveyor
Yepasi bhandi conveyor
O bhandi rinotakura